विवाह गर्न मन छैन भने यस्ता गफ लगाएर टारिदिन्छन् युवतीहरु
एजेन्सी । उमेर पुगेपछि घरमा आमाबुबालाई लाग्छ विवाह गरिदिए आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ । तर आजकल २० देखि २५ उमेरभित्रका युवतीहरु विवाह गर्न रुचाउँदैनन । त्यही कारण पनि उनीहरु विवाह टाल्न विभिन्न बहाना बनाउने गर्छन् । आजकलका युवतीहरु झन् आफ्नो करिअर बनाउन व्यस्त रहेका हुन्छन् ।
सुन्दै आश्चर्यचकित पार्ने विवाहका घटनाहरु
एजेन्सी । आफूलाई विवाह गर्नु मात्र केटाहरूको लागि होईन। २००३ मा, कलाकार जेनिफर होजले उनको ३० औं जन्मदिनमा नेदरल्याण्ड्समा आफूलाई विवाह गरिन्।
अनौठो परम्परा ! आमा छोरीको एउटै श्रीमान्
एजेन्सी । हरेक ठाउँको आफ्ना आफ्ना संस्कृति र रीतिरिवाज रहेका छन् । तर, केही यस्ता अनौठा रीतिहरु पनि रहेका छन् जसले अधिकांशलाई आश्चर्य चकित पार्ने गर्छन् । यस्तै रीति बंगलादेशमा रहेको छ ।
यस्तो पो विवाहको प्रस्ताव !
एजेन्सी । विवाह सबैका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । विवाह का लागी अनेकौं प्रस्ताव हरु हुने गर्छन् । भारतको मध्यप्रदेश ग्वालियर शहरमा एक शिक्षिकाले आफ्नो बिहेको लागि दुल्हा पक्षसँग अचम्मको शर्त राखेकी छन् । उनले शर्तमा भनिन् ‘पहिला फलफुल र शितल दिने १०० बिरुवा रोप्ने त्यसपछि मात्र जन्ती लिएर आउनु ।’
यी हुन् हालसम्मकै महँगा विवाह, कसको विवाहमा कति लागेको थियो खर्च ?
रियल लाइफमा नै तीनवटीसँग विवाह गरेका बलिउडका चर्चित हस्तीहरु
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता चर्चित कलाकारहरु रहेका छन् जसले तीनवटीसम्म विवाह गरे ।